Sajhasabal.com |सागर आलेको प्रेमको यस्तो खुलासा, दाजु भन्छन्- हो उनीहरुको पहिलो भेट मलेसियामा भएको थियो (भिडियों)
माघ २६, काठमाडौं । नेपाल आइडल पहिलो सिजनका चौथो प्रतियोगी सागर आलेको प्रेमको बिषयमा निकै चर्चा चलिरहन्छ । उनी के प्रेममा छन् ? छन् भने को सँग छन् ? यो प्रश्नमा मिडिया तथा उनका फ्यानहरुमा उठिरहने प्रश्न हो ।
पछिल्लो समय खासै मिडियामा नदेखिने सागरका दाजु साजन आलेले उनको प्रेमको बिषयमा बोलेका छन् । एक मोडलसँग मलेसियामा भेट भएको कुरा पनि साजनले खोलिदिएका छन् । तलको भिडियो रिपोर्टमा दाजु साजनले सागरको प्रेमको बिषयमा बोलेका सबैकुरा हेर्न पाउनुहुनेछ ।